लसुन खानुस् जवान बन्नुस्
नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या दुईलाख साठी हजार बढी
अब मोबाइलबाटै सरकारी सेवा
नेपालमा सक्रिय संक्रमित पाँच हजार एक्काइस
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा जाडोमा न्यानो कपडा वितरण
प्रथम समृद्धि गोरिल्लाज बास्केटबल प्रतियोगीता सम्पन्न
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या उन्नाइस सय नाघ्यो
आयकर कर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद थप्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको माग
एक नम्बर प्रदेशमा ढकाल समूहलाई समर्थन
कामना सेवाको १४औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
बझाङमा ग्लोबल आइएमईको शाखा
Home जडिबुटि लसुन खानुस् जवान बन्नुस्
on: ११ श्रावण २०७७, आईतवार ०९:४६
लसुनमा औषधीय गुण हुन्छ । त्यसैले यसलाई घरायासी औषधिको रुपमा प्रयोग समेत गर्ने गरिएको छ । आयुर्वेदमा लसुनलाई जवान बनाइराख्ने औषधिको रुपमा लिइन्छ र जोर्नीको दुखाई कम गर्ने औषधिको रुपमा पनि लसुनलाई नै लिइन्छ । यसरी परम्परागत घरेलु औषधिको रुपमा तथा आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा प्रयोग हुदै आएको लसुनमा औषधीय गुण हुन्छ भन्ने कुरा एलोप्याथिक विशेषज्ञहरु पनि मान्दछन् । यसै कारणले गर्दा चिकित्सकहरुले विरामीलाई सन्तुलित भोजनको बारेमा सल्लाह दिँदा खानामा लसनुको प्रयोग फाइदाजनक हुने सल्लाह दिन्छन् ।
लसुन सेवन गर्दा सरीरमा भिटामिन ए, बी तथा सी का साथै आयोडिन, आइरन, पोटासियम, क्याल्सियम तथा म्याग्नेसियम जस्ता खनिज तत्वहरु समेत प्राप्त हुन्छ । कोलेस्टेरोलको समस्याबाट पीडित मानिसहरुका लागि लसुन संजिवनी बुटी सरह नै हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । दिनहुँ लसुनको सेवन गर्दा रगतको कोलेस्टेरोल मात्रा १२ प्रतिशत सम्मले कम हुन्छ । लसुनले नशाभित्रै रगत जम्ने तथा बाक्लो रगत हुने समस्याबाट पीडित हरुका लागि समेत निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले रगत पातलो बनाउने र रक्त प्रवाह सूचारु गर्नमा मद्दत् गर्छ ।
दमका रोगीहरुका लागि समेत लसुन औषधि नै हो । ३० मिलीलिटर दुधमा लसुनका पाँच केश्रा उमालेर दिनहुँ खानाले सुरुवाती अवस्थाका दमका रोगीलाई निकै फाइदा पुग्छ । अदुवा मिसाएको चियामा लसुनका केश्रा मिसाएर खानाले पनि दमका रोगीलाई फाइदा गर्छ । साथै क्षयरोगीका लागिसमेत लसुनको सेवन फाइदाजनक हुन्छ । लसुनमा एन्टिबायोटिक औषधि जस्तै गुण हुने र यो किटाणुनासक हुने भएकाले यसले क्षयरोगका किटाणुलाई समेत नष्ट गर्ने बताइन्छ ।
सरस्यौँको तेलमा लसुन पकाएर उक्त मिश्रणले मालिस गर्नाले सरीरको विभिन्न भागको दुखाइ कम हुन्छ । लसुनमा भिटामिन सी हुने हुनाले यसले स्कर्भी नामक रोगबाट समेत बचाउँछ । लसुनले कब्जियतको समस्या पनि दूर गरिदिन्छ । सूजन, जोर्नी दुख्ने, खोकी जस्ता समस्याको उपचारमा पनि लसुन कामयाबी हुन्छ । चिसोका कारण अपच भएर पेट ढाडिएको छ भने लसुन पोलेर खानुहोस् त्यसले चिसो र अपच हटाइदिन्छ ।
चिनियाँ र कोरियालीसँग विवाह गर्न प्रतिबन्ध
प्रभावित बन्दै वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स आप्रवाह : वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदार कहिलेसम्म पठाईरहने ?
प्यारी डेमा छिरिङ ! तिमी यो देशकी फूल हौ कि काँडा ?
चिट चोर्न नपाएपछि नाराबाजी, परीक्षा रद्द
प्रकाशक – रोहिणी देवि आचार्य
सम्पादक – घनश्याम आचार्य
Kageshwori Manohara, Kathmandu
Email:info@duniyakokhabar.com, dkweekly@gmail.com, dkweekly@yahoo.com
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं : ३९५/०७५/०७६
2017 Powered By Duniyakokhabar